Fast Fashion ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာကြောင့် fast fashion ကို မရွေးချယ်သင့်တာလဲ?
in Fashion, General Knowledge, Lotaya
fast fashion ဆိုတာ နာမည်ကြီး brand အဝတ်အစားတွေကို စျေးပေါပေါ၊ အရည်အသွေးနိမ့်နိမ့်ဖြင့် တစ်ခါသုံးအဝတ်အစားအဖြစ် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Catwalk (သို့) အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ဖက်ရှင်တွေကို နမူနာယူပြီး ဖြင့် လမ်းဘေးစတိုးတွေမှာ ရောင်းချနေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စျေးကွက်ထဲကို အချိန်တိုအတွင်း လျှင်လျှင်မြန်မြန်ရောက်ဖို့နှင့် ရာသီအမှီရောက်ဖို့ တမင်ဖန်တီးထားတဲ့ စီးပွားရှာနည်းတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုက စျေးဝယ်ခြင်းဟာ ဇာတ်လမ်းတွဲလိုမျိုး လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမျှသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့နောက်မှာပဲ ‘fast fashion’ ဟာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ရုတ်တရက် စျေးဝယ်ခြင်းဟာ ဝါသနာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့အဝတ်အစားတွေ၊ အင်မတန်လန်းတဲ့အဝတ်အစားတွေကို စျေးနှုန်းနည်းနည်းလေးနဲ့ ဖက်ရှင်တံဆိပ်တွေကိုလည်း ဝတ်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။ လူတိုင်းကလည်း ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၎င်းက ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းကနေ တစ်နှစ်လျှင် အထည်ပေါင်း ၈၀ ဘီလီယံကျော်ရရှိပါတယ်။ fast fashion ထုတ်လုပ်မှုဟာ လွန်ခဲ့သော အနှစ် (၂၀) ကထက် ၄၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပိုမိုထုတ်လုပ်လာပါတယ်။ ဒါဆိုရင် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာက ဘာဖြစ်မလဲ? fast fashion ကို အမှန်အကန်နားလည်ဖို့ ဒီစာလေးကို အဆုံးဖတ်လိုက်ရအောင်။
Fast Fashion နှင့် ပြဿနာ
အဝတ်အစားတွေဟာ စျေးနည်းလာတာနဲ့အမျှ အရည်အသွေးတွေကလည်း နိမ့်လာပါတယ်။ တစ်ခါသုံးအဝတ်အစားတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။ ဒီအဝတ်အစားတွေကို ဖန်တီးရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အပြုသဘောနည်းနည်းပါနိုင်ပေမယ့် လူတွေကို အဝတ်အစားဝယ်ယူဖို့ မက်လုံးသက်သက်ဖန်တီးတာမျိုးတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ အဝတ်အစားတွေဟာ ကြာကြာမခံရုံသာမကဘဲ နောက်ထပ် တံဆိပ်အသစ်အသစ်တွေထွက်လာတဲ့အခါ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ စွန့်ပစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ထပ်မံဝယ်ယူကြပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို မြေဖို့ခြင်း (သို့) မီရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းတွေ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
fast fashion ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ဆိုးကျိုးတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ အဝတ်အစားတွေဟာ အမှန်တကယ်ပျက်စီးဖို့ တစ်ခါတလေမှာ နှစ် ၂၀၀ လောက်ကြာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်မတို့ရဲ့ ကမ္ဘာဂြိုလ်ဟာ သဘာဝနှင့် မဆိုင်သော အရာများနှင့် တစ်ချိန်လုံးညစ်ညမ်းလာနေရပါတယ်။
Fast Fashion နဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာ
Fast Fashion ရဲ့ အကြီးဆုံးနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုအတွက် ဒုတိယအကြီးမားဆုံးအဆီအငွေ့ထုတ်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် အထည်နှင့် အထည်အလိပ်ထုတ်လုပ်မှုဟာ Greenhouse gases ထုတ်လွှတ်မှု တန် ၁.၂ ဘီလီယံ ခန့်ထုတ်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းနှင့် ရေကြောင်းလိုင်းများမှ စုစုပေါင်းဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုထက် ပိုများတယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ အဝတ်အထည်ထုတ်လုပ်မှုဟာ ရှားပါးပြီးဖြစ်သော အဖိုးတန်အရင်းအမြစ်များစွာကို အသုံးပြုပါတယ်။
နိုင်ငံတွင်းက အထည်အလိပ်စက်ရုံတွေကနေ အဆိပ်အတောက်ရှိသော ရေဆိုးတွေကို ဖြစ်လာစေပါတယ်။ ၎င်းထဲမှာ ခဲတွေ၊ မာကျူရီတွေ၊ arsenic တွေဟာ လူသားတွေနှင့် ရေနေသတ္တဝါတွေရဲ့ ဘဝတွေကို ပြင်းထန်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိစေပါတယ်။ အဝတ်အထည်စက်ရုံတွေကနေလာတဲ့ စွန့်ပစ်ရေဆိုးတွေဟာ မြစ်တွေဆီကို စီးဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါ မြစ်ထဲမှာရှိတဲ့ သတ္တဝါတွေအတွက်ပါ စဉ်းစားပေးရပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့် – အထည်အလိပ် ၁ ကီလိုဂရမ်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် ရေလီတာ ၂၀၀၀၀ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တစ်နိုင်ငံထဲတွင် တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲ အဝတ်အထည်စက်ရုံတွေကနေ ရေချိုတွေထဲကို ရေဆိုးရေညစ် တန်ပေါင်း ၂၂၀၀၀ အထိ ရောက်ရှိနေပါတယ်။
ဒီအဆိပ်သင့်ရေတွေဟာ လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘဝတစ်လျှောက်လုံးစာအတွက် ဆိုးကျိုးကောင်းကောင်းသက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသားတွေရဲ့ အစားအစာအတွက် သစ်တောတွေမရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို ကာကွယ်ဖို့လည်း မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီ fast fashion လုပ်ငန်းရဲ့ ဆိုးကျိုးနောက်တစ်ခုက မြေ၊ သစ်တော်နှင့် ကျွန်မတို့ရဲ့ ဂေဟစနစ်တ်ခုလုံးကို နာကျင်စေနိုင်ပါတယ်။ rayon နှင့် viscose လိုမျိုး သစ်သားတွေကို အခြေခံထားတဲ့ အမျှင်တွေဟာ သစ်တောပြုန်းတီးမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။
အထက်မှာပြောခဲ့သလိုမျိုး fast fashion ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ဆိုးကျိုးတွေသက်ရောက်စေလို့ အဓိကပြောခဲ့ပေမယ့် လူ့အခွင့်အရေးကို ထိခိုက်စေတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေရဲ့ အခြေအနေမှာလည်း လူသားမဆန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။
ခံနိုင်ရည်မရှိတော့လောက်အောင်အထိ ရှည်လျားလွန်းသော အလုပ်ချိန်များ၊ ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် နည်းပါးလွန်းသော လကစားနှင့် လွန်လွန်ကြူးကြူးအန္တရာယ်များသော လုပ်ငန်းခွင်တွေက ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းရဲ့ အခြေအနေတစ်ချို့ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ Rana Plaza ကိစ္စဟာ ဒီလုပ်ငန်းရဲ့ လုပ်ကိုင်နေသူတွေရဲ့ မလုံခြုံမှုတွေထဲက ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ fast fashion တွေကို ဝယ်ယူအားပေးဝတ်ဆင်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါသလား? Com မှာ ရေးပေးခဲ့ပါဦး။